पार्टीभित्र काम गर्ने नेता तथा कार्यकर्ता पन्छिने स्थिति बनेको छ ! « Media for all across the globe
पार्टीभित्र काम गर्ने नेता तथा कार्यकर्ता पन्छिने स्थिति बनेको छ !
कोरोना भाइरस रोकथामको लागी लगाइएको लकडाऊनका कारणले विश्वको अर्थव्यवस्था निकै धरापमा परेको बेला हाम्रो देश नेपालको अर्थव्यवस्था कस्तो होला मानब समुदायका मुलभुत – गास, बॉस, कपास शिक्षा स्वास्थ्य र रोजगारमा निकै असर परेको बेला !
नेपाल सरकारले नेपाली जनता का मुलभुत गरजा पूर्ण गर्नुको सट्टा सत्ताको चलखेल सुरु गरेको छ जब देश मा सरकार बलियो हुन छ तब मात्र सडकदेखी संसदसम्म आंदोलन हुने गर्छन – एमसीसीको कुरो जातीय विभेदका कारणले गरिएको रुकुम घटना, नागरिता ऐन, सीमाविवाद सबै विषयलाई लिएर नेपाली जनताले आंदोलन गर्नु जायज कुरो हो तर आंदोलनको समीक्षा गरी सत्य तथ्य छानबीन गर्ने संसदीय शासन प्रणालीको अधिकार को विषय हो हिजो पार्टी एकता भईरहेको बेला पार्टीका नेता कार्यकर्ता मात्रै नभई आम किसान/ मजदुर र कम्युनिष्ट पार्टीका सुभेच्छुकहरु निकै उत्साहित भएका थिए । उनीहरुले पार्टी एकतालाई अत्यन्तै महत्वका साथ हेरेका थिए । तर पार्टी एकता प्रक्रिया अगाडि बढाउने सबालमा देखिएका केहि कदमले अहिले निकै निराशा बनाएको छ ।
पार्टी एकता घोषणा भएको २ वर्षसम्म पनि पार्टी एकता प्रक्रिया पुरा हुन नसक्दा उत्साहित भएको वर्ग अहिले निराश बनेको देखिन्छ । पार्टी एकता प्रक्रिया नै पुरा नहुँदा सोंचिएका कामहरु हुने विषय त रहेन साथै एकता जुन उद्देश्य र सोंचका साथ गरिएको हो, त्यो व्यवहारिक रुपमा राम्रोसँग सम्पन्न गर्न नसक्नुका कारणले थप पीडा महसुस भएजस्तो भएको छ ।
पार्टी एकता घोषणा गर्दै गर्दा समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नारा दिइएको थियो । तर एउटा मजदुरको हिसाबले हेर्दा नेताहरु आफ्नो सीट सुरक्षित गर्न, आफुँ बलियो बन्नको निम्ति मात्रै गरेका हुन् कि भन्ने जस्तो देखिएको छ । अहिले माथिदेखि तलसम्म सबै गुटै गुटमा विभाजित भएको देखिन्छ । जसको प्रभाव सबै ठाउँमा आफैं नेता हुनुपर्ने, आफैंले नेतृत्व गर्नुपर्ने मनोविज्ञानको विकास भएको छ । कम्युनिष्ट आन्दोलनमा लागेकाले त गाह्रो काम आफुँले लिने अनि सजिलो काम अरुलाई दिने भन्ने हुन्छ तर त्यस्तो चरित्र कहिँ कतै पनि देखिएको छैन् ।
केन्द्रदेखि तलसम्मै गुटका आधारमा पदको बाँडफाँड गरिएको छ । काम गर्ने नेता तथा कार्यकर्ता पन्छिने स्थिति बनेको छ । यो प्रवृत्ति पार्टी भविष्य र कम्युनिष्ट आन्दोलनका निम्ति निकै घातक बन्न सक्छ त्यसैले अहिलेको भयंकर परिस्थिति मा पार्टी फुटनु भन्दा जुटनु पर्छ ।
रिमाल अखिल भारत नेपाली विद्यार्थी मंच महाराष्ट्र राज्यसमितिका अध्यक्ष हुन्।